Milton Friedman mitsara: Iwo akanakisa mitsara, ndiani uye chii dzidziso yake | Ehupfumi Zvemari
Claudi Casals | 30/06/2021 09:00 | General hupfumi
Kune vazhinji vane hupfumi vane mukurumbira vanogona kutikurudzira nehuchenjeri hwavo uye neruzivo, semuenzaniso, kuburikidza nemitsara mikuru yaMilton Friedman. Uyu weAmerica akawana mukurumbira wakakosha muhafu yepiri yezana ramakore rechiXNUMX. Panguva iyoyo ndipo paakave mumwe wevatsoropodzi vezvinyorwa zvehupfumi zvine chekuita naJohn Maynard Keynes. Akatsanangura musanganiswa wehupfumi hwakave hwakajairika huwandu hwakawanda hwenyika dzakasimukira panguva yeHondo Yenyika II.
Nekuda kwekukosha uye pesvedzero iyo Friedman aive nayo panguva iyoyo, isu tichaenda kuzotsaurira chinyorwa ichi kwaari. Tichataura zvishoma nezvehupenyu hwake uye dzidziso yake, asi isu tichanyanya kusimbisa mitsara yaMilton Friedman.
1 Aya gumi nemaviri akanakisa mitsara yaMilton Friedman
2 Friedman ndiani?
2.1 Ndeipi dzidziso yaMilton Friedman?
Aya gumi nemaviri akanakisa mitsara yaMilton Friedman
Friedman akatsanangurwa na The Economist Chemhondoro "Nyanzvi mune zveupfumi yehafu yepiri yezana ramakore rechiXNUMX" uye "hofori pakati pevezvehupfumi." Neichi chikonzero, mazwi aMilton Friedman haana kutambiswa. Zvinokurudzirwa kuti uverenge kuitira kukurudzira kufunga kwedu kwakasimba:
"Mazhinji emakakatanwa anopokana nemusika wepachena anoenderana nekushayikwa kwekuvimba murusununguko pacharo."
«Ndiri kutsigira kunyoresa zvinodhaka. Zvinoenderana nehurongwa hwangu hwekukosha, kana vanhu vachida kuzviuraya, vane kodzero yekuzviita. "Zvimwe zvinokuvadza zvinobva mumishonga inyaya yekuti hazvisi pamutemo."
"Kunze kwekusara, vemabhizimusi vari kutsigira musika wepachena, asi vanopokana kana zvasvika pabhizinesi ravo vega."
"Idambudziko rehunhu kuti hurumende iri kushanduka kuita matsotsi vanhu vanogona kunge vachiita chimwe chinhu chatisingatenderi iwe neni, asi chinhu chisiri kukuvadza mumwe munhu."
"Kumwe kwekukanganisa kukuru kutonga marongero nezvirongwa nemaitiro avo kwete mhedzisiro yavo."
"Unofanirwa kusiyanisa zvakajeka kuve pro-musika uye kuve pro-bhizinesi."
“Nzanga inoisa kuenzana pamberi perusununguko inenge isina. Iyo nzanga inoisa rusununguko pamberi pekuenzana ichawana chiyero chikuru chevaviri.
Hurumende hadzimbodzidza; vanhu chete ndivo vanodzidza.
“Tinofanira kuziva kuti hatifanire kutarisira chinhu chisingawanikwe. "Ndinoda kuona zviitiko zvehurumende zvakaderera pane zvatiri izvozvi, asi handifunge kuti tinogona kuva nemamiriro ezvinhu atisingade hurumende zvachose."
«Hukuru hunhu hwemahara musika system ndeyekuti musika hauna hanya neruvara rwevanhu; haana basa kuti chitendero chake ndechei; iwe unongo chengeta kana iwe uchigona kuburitsa chimwe chinhu chaunoda. Iyo ndiyo sisitimu inoshanda kwazvo yatakawana kutendera vanhu vanovengana kushandira pamwe nekubatsirana.
“Nharo yekurambidzwa kwezvinodhaka yakasimba chaizvo uye haina kusimba sekutaura kwekurambidza kudya zvakanyanya. Isu tese tinoziva kuti kunyanya kudya kunokonzera kufa kwakawanda kupfuura zvinodhaka.
«Kune nzira ina dzekushandisa mari: Unogona kushandisa yako wega mari, pauri. Uye iwe paunoshandisa yako wega mari pauri, iwe unongwarira chaizvo kwaunoishandisa, uye iwe unova nechokwadi chekuti iwe unowana zvakanyanya kudhora rega. Unogona kushandisa yako mari, kune vamwe. Semuenzaniso, ini ndinotengera chipo kune mumwe munhu. Paunoita izvi, unochenjerera kuti usashandise yakawandisa, asi iwe hauna hanya zvakanyanya nezviri mukati mechipo futi. Unogona kushandisa mari yemumwe munhu, pauri. Zvakanaka, uye kana ukashandisa mari yemumwe munhu pauri, saka unova nechokwadi chekudya kwakanaka. Chekupedzisira, unogona kushandisa mari yemumwe munhu, kune mumwe munhu. Uye kana ndikakwanisa kushandisa mari yevamwe kune mumwe munhu, saka handina basa nemari yandinoshandisa kana chandinotenga. Uye ndizvo zvinoitwa nehurumende uye zvinomiririra zvikamu makumi mana kubva muzana zvemari yenyika ".
Iye zvino zvatinoziva mitsara gumi nemaviri akanakisa aMilton Friedman, ngatitaurei zvishoma nezvekuti murume uyu aive ani. Akazvarwa muna 1912 muBrooklyn. Mhuri yake yechiJuda yaive nezvinhu zvine mwero, asi kunyangwe zvakadaro, Friedman akakwanisa kubudirira pakudzidza pazera diki uye akapedza chikoro chepamusoro aine makore gumi nematanhatu chete Gare gare, akapinda makirasi mumathematics uye economics paRutgers University. Akapedza dzidzo yake nedhigirii raTenzi mune zvehupfumi kubva kuYunivhesiti yeChicago. Mushure memakore makumi matatu ekudzidzisa, akapedzisira ave kuenda pamudyandigere muna 30.
Milton Friedman akagamuchira Mubayiro weNobel nekuda kwemipiro yake kuhupfumi. Kunyangwe mushure mekurega basa, nyanzvi yezvehupfumi iyi yakaramba ichitaura nekunyora pachena kusvika yapfuura muna 2006.
Ndeipi dzidziso yaMilton Friedman?
Zvinofanira kucherechedzwa kuti Milton Friedman ndiye muvambi weinonzi monetarist dzidziso. Iyo dzidziso maererano nekuti masimba emusika wemahara, semutemo wakajairika, anoshanda kupfuura chero kupindira kwevanhu mukusimudzira kukura kwehupfumi kwakadzikama pasina kumanikidza kwemitengo.
Ndinovimba makotesheni makuru aMilton Friedman akakukurudzira uye akakubatsira iwe kuwana nzwisiso nyowani. Kuziva avo vakuru vezvehupfumi, pfungwa dzavo uye maitiro avo anogara ari sarudzo yakanaka yekudzidza uye kukura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Milton Friedman Quotes